ပိုက်နှင့်ပိုက်ပြင်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် - သတင်း - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်Ltd.Â
Fittings (အထူးသဖြင့်အဆန်းအမျိုးအစားများ) ကိုထည့်သွင်းဖို့ပိုက်ဆံ, အချိန်, ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများလိုအပ်နှင့်ပိုက်နှင့်ပိုက်စနစ်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆို့ရှင်နည်းပညာပိုင်း fittings ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သီးခြားစီဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
တစ်ပိုက်စနစ်ကဒီဇိုင်း (သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်) လာသောအခါစံ codes တွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ ပိုက်စံချိန်စံညွှန်းပြဌာန်းပေးသောအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်:
a · ASME: စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ American Society
a · A112.19.1 ကြွေသွန်း-သံနှင့်သံမဏိပိုက်လ်တာစံချိန်စံညွှန်းများ
a · A112.19.2 ကြွေပိုက်လ်တာစံ
a · ASTM အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ: စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း
a · API ကို: အမေရိကန်ရေနံအင်စတီကျု
a · AWS: အမေရိကန်ဂဟေဆော်ခြင်း Society က
a · AWWA: အမေရိကန်ရေ Works တွင်အသင်းမှ
a · MSS: ထုတ်လုပ်သူ Standardization Society က
· ANSI: American National စံချိန်စံညွှန်းများ Institute
a · NFPA: အမျိုးသားမီးသတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
a · EJMA: ချဲ့ပူးတွဲထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ
a · CGA: Compressed ဓါတ်ငွေ့အစည်းအရုံး
a · ASME B36.10M: welded နှင့်စပ်ရာမရှိသောစီရင်-သံမဏိပိုက်
a · ASME B36.19M: stainless-သံမဏိပိုက်
a · ASME B31.3 2008: Process ကိုပိုက်
a · ASME B31.4 XXXX: ပါဝါပိုက်
အဆိုပါ B31.3 နှင့် B31.4 codes တွေကိုရေနံသန့်စင်တှငျတှေ့ပိုက်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုရှိသည် ဖြစ်. , ဓာတု, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူ, ဆီမီးကွန်ဒတ်တာနှင့် cryogenic အပင်များနှင့်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပင်များနှင့်ဆိပ်ကမ်း။ ဒီကုဒ်တွေကိုပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, ဒီဇိုင်း, လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ, စုဝေးစိုက်ထူ, စာမေးပွဲ, စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုက်၏စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်။ အဆိုပါ codes တွေကို, ကုန်ကြမ်းအလယ်အလတ်နှင့်အချောဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်အားလုံးအရည်များအတွက်ပိုက်သက်ဆိုင်ပါ၏ ရေနံထွက်ပစ္စည်း, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ရေနွေးငွေ့, လေနှင့်ရေ; fluidized စိုင်အခဲ, ရေခဲသေတ္တာနှင့် cryogenic အရည်။
The material with whichapipe is manufactured is often the basis for choosingapipe. ပစ္စည်းs used for manufacturing pipes include:
a ·ကာဗွန် (CS) နှင့်သွပ်ရည်စိမ်စတီး
a ·သက်ရောက်မှု-စမ်းသပ်ပြီးကာဗွန်သံမဏိ (ITCS)
a ·အနိမျ့-အပူချိန်ကာဗွန်သံမဏိ (LTCS)
a ·သံမဏိ (SS)
a · non-ferrous သတ္တု (ကြေးနီ, inconel, incoloy နှင့် cupronickel ပါဝင်သည်)
a · non-သတ္တု (acrylonitrile butadiene styrene (ကို ABS) တို့ပါဝင်သည်, ဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (FRP), polyvinyl chloride တို့ (PVC), High-density ကို polyethylene (စတင်) နှင့် toughened ဖန်)
a · Chrome ကို-molybdenum (အလွိုင်း) သံမဏိယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြု€ "A
ကြေးနီ, သံမဏိ, PVC, ကလိုရင်း polyvinyl chloride တို့ (CPVC) သို့မဟုတ်ကို ABS: ပိုက်နှင့် Tube များအတွက် fittings ၏အလောင်းများကိုအများဆုံးမကြာခဏချိတ်ဆက်ပိုက်သို့မဟုတ်ပြွန်ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ (သက်ဆိုင်သောအဖြစ်) ကိုပိုက်, ကျန်းမာရေး, သို့မဟုတ်အဆောက်အဦး code ကခွင့်ပြုမဆိုပစ္စည်းကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဒါဟာစနစ်အတွက်အခြားပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်, အအရည်များပို့ဆောင်ထားကြောင်းနှင့်အပူချိန်နှင့်ဖိအားအတွင်းပိုင်း (နှင့်ပြင်ပ) စနစ်။ ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းသို့မဟုတ်ကြေးဝါ fittings ကြေးနီပိုက်နှင့်ပိုက်စနစ်များအတွက်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ မီးအန္တရာယ်, earthquakeresistance နှင့်အခြားအချက်များလည်းလျောက်ပတ်သောပစ္စည်းများ၏ရှေးခယျြမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။
ပိုက် fittings: 1) ကြေးနီ (ဂဟေဆက်);
2) သံသို့မဟုတ်ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း (ပေါင်းလိုက်သော);
3) ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း (compression);
4) ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း (ဂဟေဆက်ဖို့ compression);
5) ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း Adapter က။